FAQs - Changzhou Plet Printing Teknolojia CO, .LTD
Inona no tena karazana SPS squeegee?
SPS squeegee dia voasokajy ho sokajy telo lehibe: 1. Nentim-paharazana M-karazana squeegee (tsy misy fanohanana lovia). 2, FGB fiberglass fikikisana. 3, AS samirery karbaona fibre ditin fikikisana.
Misy modely maro ao amin'ny fingotra ampahany amin'ny SPS squeegee?
Misy amin'izao fotoana izao modely roa, ny iray dia ny M-karazana fingotra ampiasaina ao amin'ny M-karazana sy FGB fiberglass kobany, ary ny iray dia ny PLUS fingotra ampiasaina ao amin'ny AS-karbaona fibre (conductive, solvent-mahatohitra kokoa, sy ny maro hafa wear- mahatohitra).
Inona avy ireo fepetra arahana ny haben'ny M fikikisana karazana lakaoly?
M modely manana 9 * 50, 9 * 30, 7 * 40, 5 * 25, 5 * 20 tendron'ny ravin hatevin'ny araka ny hateviny, ary azo namboarina araka ny fepetra mpanjifa.
Inona avy ireo refin'ny FGB fiberglass scraper?
Ny lamba nentim-paharazana orinasa fanontam-pirinty FGB fiberglass fikikisana fepetra arahana ny 9 * 50, ny halavan'ny fanapahana araka ny fepetra mpanjifa. Azo namboarina araka ny fepetra mpanjifa.
Inona avy ireo lafiny amin'ny AS karbaona fibre squeegee?
Ny lamba nentim-paharazana orinasa fanontam-pirinty AS karbaona fibre fikikisana fepetra arahana 7 * 50, ny halavany araka ny fepetra mpanjifa. Azo namboarina araka ny fepetra mpanjifa.
Inona no endrika ny rakitra sy ny customization ny fotoana ilaina ho an'ny tolotra fomba amam-panao?
3D: STP, XT; CAD: 2000 dikan, na haba fotoana: ao anatin'ny 5 andro fiasana
Ny telo karazana azo scraper tany. M modely sy FGB modely tokana ambony indrindra-mitoto vary vola 0.5mm (200 harato mitoto kodia). AS karbaona fibre fikikisana tokana ambony indrindra Fitotoana Vary vola 0.1mm (200 harato mitoto kodia, karbaona fibre birao koa ny tany). Ny squeegee izay vao nampiasaina ny ahitana be dia be ny solvent ao anatiny. Ny hamafin 'ny antsy sisiny loatra ho nitoto ambany avy hatrany. Mitaky ihany 24 ora alohan'ny-mitoto vary.
Ahoana ny fametrahana FGB fiberglass scraper Ary raha karbaona fibre scraper ho mahazatra e?
Samy ny FGB fiberglass scraper sy ny AS karbaona fibre scraper dia 1.2mm matevina. Afaka hapetraka miaraka amin'ny 8mm pad matevina, izay afaka manome.
Fikojakojana ny SPS Squeegee?